प्रकाश सपुतले किने काठमाडौंमा घर (तस्बिरसहित) - नेपाल मिडिया सेन्टर डट कम
काठमाडौं । पछिल्लो समयका चर्चित गायक प्रकाश सपुतले काठमाडौंमा घर किनेका छन् । बाग्लुङ पुख्र्यौली घर भएका प्रकाशले आफ्नो गायन क्षेत्रबाटै आर्जन गरेको पैसाले काठमाडौंमा घर किनेका हुन् । उनले काठमाडौंमा घर किनेकोबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएका छन् ।
तस्बिरः प्रकाश सपुतको फेसबुकबाट ।
नयाँ घरमा बसाई सर्दै उनले अहिलेसम्म सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद समेत दिएका छन् । ‘शुरुका दिनमा आश्रय दिने, काम दिने, अवसर दिने, हौसला दिने, सहकार्य गर्ने, माया दिने देश विदेशका तपाई सप्पै सप्पैलाई धन्यबाद । मैले आफ्नो सपनालाई जुनसुकै परिस्थितिमा पनि विचलित हुन दिईन्, समयको सधै सदुपयोग गरे, संघर्ष प्रति समर्पित भए, काम प्रति ईमानदार र आर्थिक अनुशासनमा बसे’ उनले लेखेका छन् ।
अब धेरै आर्थिक महत्वकांक्षा नरहेको उनको भनाई छ । ‘अब धेरै आर्थिक महत्वकांक्षा छैन । उसै पनि म स्थिर छैन । म स्वतन्त्र जिवन चाहन्छु। बाध्यताले होईन रहरले काम गर्न चाहन्छु । मनको सुन्न चाहन्छु । कसैसंग व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा नगरौ भन्ने चाहान्छु । तर जिउनको लागि आधारभुत आवश्यकताहरु हुन्छन । त्यसमध्ये आफ्नै एउटा छानो जरुरी थियो । पुरा भयो’ उनको स्टाटसमा लेखिएको छ ।
‘मैले व्यक्तिको ईकोनोमिक स्टाटसलाई उसको व्यक्तित्वसँग जोडेर कहिले हेर्दिन । म त्यस्ता धेरै व्यक्तित्वहरुसँग प्रभावित छु जो आर्थिक रुपमा सधै साधारण नै रहे । अरु केहि बेसिक कुराहरुको व्यवस्थापन हुन यो वर्ष दौडनु नै पर्ला । अर्को वर्ष देखि म अझै बढि स्वतन्त्र हुनेछु । अझै साधारण । अझै फकिर । ज़िन्दगी सबैथोक पुगेर होईन जानेर जिउने हो’ उनले उल्लेख गरेका छन् ।
‘हेर्नुन, अघिल्लो वर्ष हामीले ब्लायक कलर म्याच गरेर फोटो खिच्यौ यसपाली ह्वाईट । ठुलो कुरा होईननी ? तर यत्तिकै खुसी क्या । त्यसैले ज़िन्दगीमा खुसी हुने कन्सेप्टहरु बनाउनुस । यो पोस्ट बिन्दु जि र मेरो लभ सेलेब्रेटका लागि हो, मेरो जस्तै धरातलमा उभिएर सपना देख्नेहरुलाई प्रेरणा होस भन्नका लागि पनि हो र विशेष त तपाईहरुलाई धन्यबाद दिनको लागि हो’ नयाँ घरमा प्रवेश गरेका विभिन्न तस्बिरहरू सार्वजनिक गर्दै लेखेका छन् । गलबन्दी, बोल माया, दोहारी ब्याटल जस्ता चर्चित गीतमार्फत चर्चामा आएका उनी यतिबेला सबैको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल भएका छन् ।
#Happy_7th_Marriage_Anniversary_To_Us 👨‍❤️‍👨👨‍👩‍👧र सातौ बैवाहिक वर्ष गाठ संगै हामीले काठमाण्डौमा आफ्नै सानो नया घर…
Gepostet von Prakash Saput am Montag, 5. August 2019